warkii.com » Pep Guardiola Oo Digniin U Diray Real Madrid Kaddib Guul-darradii Arsenal Iyo Waxa Uu Ka Yidhi Taatikada Mikel Arteta
Pep Guardiola Oo Digniin U Diray Real Madrid Kaddib Guul-darradii Arsenal Iyo Waxa Uu Ka Yidhi Taatikada Mikel Arteta
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ku dooday inuu sii garanayay taatikada ay Arsenal kula ciyaaraysay kooxdiisa ka hor intii aanay bilaabmin ciyaartii Sabtidii ay Gunners ku garaacdayy 2-0 ee City lagaga reebay tartanka FA Cup.
Arsenal ayaa kusoo gashay shax difaaca aad loo adkeeyey, weerarkana mudnaan gaar ah la siiyey, halka khadka dhexena uu Arteta u dejiyey qaab ay difaaca iyo weerarkuba u caawin karaan, taas oo la mid ahayd sidii ay Liverpool kaga badiyeen toddobaadkii hore.
Pep Guardiola oo warbaahina la hadlay kaddib guul-darradii kooxdiisa kasoo gaadhay semi-finalka FA Cup, ayaa qirtay inuu niyad-jabsan yahay, isla markaana ka cadhaysan yahay in taatikada Arsenal ay sii saadaalin karayeen sida ay noqonayso ay haddana kooxdiisu awoodi weyday inay ka adkaato.
Tababaraha reer Spain waxa uu canaan u jeediyey ciyaartoyda kooxdiisa oo uu tilmaamay in aanay si wanaagsan u ciyaarin, waxaanu yidhi: “Si fiican umaanu ciyaarin. Qoomamada i haysaa kaliya maaha in aanu guul-darraysanay oo waa wax dhici kara, laakiin waxay tahay in aanaan u ciyaarin qaybtii hore sida aanu qaybtii labaad u ciyaarnay.”
Guardiola waxa uu intaa kaddib ku dooday inuu sii ogaa shaxda Arsenal kula ciyaaraysay, waxaanu yidhi: “Waxaanu ku bilownay qaab liidata oo aan ahayn sidii aanu u ciyaari lahayn. Mar walba waxaanu u diyaarsanahay si adag, laakiin maanta maya.
“Waan sii ogaa inay shan difaac dambe ah ku ciyaarayaan oo ay cadaadis badan soo samaynayaan, si fiicana isku difaacayaan. Waxay sidaasi ku dhacday Liverpool oo waanu ogeyn. Laakiin maanaan wanaagsanayn. Waa inaanu si fiican u ciyaarno kulanka Champions League si aanu usoo gudubno. Waxaanu haysanaa laba toddobaad, waxaananu doonaynaa inaanu (Real Madrid) ula ciyaarno sida Finalka Champions League, waana fursaddayadii ugu dambaysay ee aanu koob ku raadin karayno.”